Forex Trading မှာ အရေးအကြီးဆုံးအရာ – Myanmar Forex Villa
SEO články on EURAUD	(Daily)
w88 best on Pro Trader
dominoqq on အဆင်ပြေပြေဖြတ်သန်းချင်လျှင်
Nancyhoaby on အဆင်ပြေပြေဖြတ်သန်းချင်လျှင်
กระเป๋าแบรนด์เนม on AUDNZD (Daily)
Forex Trading မှာ အရေးအကြီးဆုံးအရာ
Forex Trading မှာ အရေးအကြီးဆုံးအရာတစ်ခုခုပြောပါလို့ မေးလာခဲ့ရင် ” Patience ” စိတ်ရှည်သည်းခံမှုလို့ပဲ ပြန်ဖြေမှာပါ။
ကမ္ဘာကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကြီး ဝါရင်းဘတ်ဖက် ပြောခဲ့ဖူးတာရှိပါတယ်။ Trading ဆိုတာ စိတ်မရှည်တဲ့သူတွေရဲ့ ပိုက်ဆံကို စိတ်ရှည်တဲ့သူတွေဆီလွှဲပြောင်းပေးတဲ့နေရာ ဆိုတဲ့စကားပါ။ Trader အများစုဟာ စိတ်မရှည်ကြပါဘူး။
❌ Higher Timeframe D1, W1 မပြောနဲ့ H4 လောက်သုံးဖို့တောင် စိတ်မရှည်ကြပါဘူး။ 30mins, H1 လို Timeframe အသေးတွေမှာ trade ရင်း မြန်မြန်အဖြေပေါ် များများမြတ်မယ်လို့ တွေးနေကြဆဲပါပဲ။
❌ Trade တစ်ခုကို entry မဝင်သေးဘဲ စောင့်ကြည့်စဉ်းစားပြီး တတ်နိုင်သမျှ risk နည်းအောင်လုပ်ဖို့ စိတ်မရှည်ကြပါဘူး။ စိတ်ကထင်တာနဲ့ လက်က နှိပ်ပြီးသွားပြီ။
❌ StopLoss ထိပြီးရင် သို့ Float ဖြစ်နေရင် အဲဒီ Pair ကို ထပ်ဝယ်၊ ထပ်ရောင်း လုပ်တာကို Revenge Trade လို့ခေါ်ပါတယ်။ Position တွေပွထပြီး နောက်ဆုံး account ပျက်သွားတာ Revenge Trade ကြောင့်ပါပဲ။ အဲဒီလို မ trade ဖြစ်ဖို့ စိတ်မရှည်တတ်ကြပါဘူး။
❌Forex Trading မှာ အရေးကြီးတာ Education ပါ။ မှန်ကန်တဲ့ Proper Education ကို Global Trainer ! Experienced Coach တွေနဲ့ ကျင့်တောင် အနည်းဆုံး အချိန်တစ်နှစ်လိုပါတယ်။ ဘယ်သူမှ education အတွက် စိတ်မရှည်ကြပါဘူး။
❌ ငွေစုလိုက်၊ Account ထဲွေဖြည့်လိုက်၊ စိတ်ထင်ရာ trade လိုက်၊ ကုန်သွားလိုက် သံသရာထဲမှာလည်ကြတယ်။ မိမိ ရဲ့ အမှားကိုရှာဖွေဖို့ ပြင်ဆင်ဖို့ စိတ်မရှည်တတ်ကြပါဘူး။
စိတ်မရှည်ခြင်းဟာ Forex လောကမှာ အကြီးဆုံးရန်သူပါ။ မိမိရဲ့ အတွင်းစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ အတွင်းရန်ပါ …ကုန်ခဲ့တဲ့ 2017 မှာ မိတ်ဆွေ ကိုယ်ဘာတွေမှားခဲ့သလဲ ပြန်ပြီးရှာဖွေ ပြီးပါပြီလား ? အဲဒီ အမှားတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့နည်းလမ်းရော ချမှတ်ပြီးပါပြီလား ?
Trader များအတွက် စေတနာစကားကတော့ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်း Patience ဟာ Forex လောက ကို အောင်နိုင်ဖို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဆိုတာပါပဲ။
Forex Trading မှာ အရေးအကွီးဆုံးအရာတဈခုခုပွောပါလို့ မေးလာခဲ့ရငျ ” Patience ” စိတျရှညျသညျးခံမှုလို့ပဲ ပွနျဖွမှောပါ။
ကမ်ဘာကြျောရငျးနှီးမွှုပျနှံသူကွီး ဝါရငျးဘတျဖကျ ပွောခဲ့ဖူးတာရှိပါတယျ။ Trading ဆိုတာ စိတျမရှညျတဲ့သူတှရေဲ့ ပိုကျဆံကို စိတျရှညျတဲ့သူတှဆေီလှဲပွောငျးပေးတဲ့နရော ဆိုတဲ့စကားပါ။ Trader အမြားစုဟာ စိတျမရှညျကွပါဘူး။
❌ Higher Timeframe D1, W1 မပွောနဲ့ H4 လောကျသုံးဖို့တောငျ စိတျမရှညျကွပါဘူး။ 30mins, H1 လို Timeframe အသေးတှမှော trade ရငျး မွနျမွနျအဖွပေျေါ မြားမြားမွတျမယျလို့ တှေးနကွေဆဲပါပဲ။
❌ Trade တဈခုကို entry မဝငျသေးဘဲ စောငျ့ကွညျ့စဉျးစားပွီး တတျနိုငျသမြှ risk နညျးအောငျလုပျဖို့ စိတျမရှညျကွပါဘူး။ စိတျကထငျတာနဲ့ လကျက နှိပျပွီးသှားပွီ။
❌ StopLoss ထိပွီးရငျ သို့ Float ဖွဈနရေငျ အဲဒီ Pair ကို ထပျဝယျ၊ ထပျရောငျး လုပျတာကို Revenge Trade လို့ချေါပါတယျ။ Position တှပှေထပွီး နောကျဆုံး account ပကျြသှားတာ Revenge Trade ကွောငျ့ပါပဲ။ အဲဒီလို မ trade ဖွဈဖို့ စိတျမရှညျတတျကွပါဘူး။
❌Forex Trading မှာ အရေးကွီးတာ Education ပါ။ မှနျကနျတဲ့ Proper Education ကို Global Trainer ! Experienced Coach တှနေဲ့ ကငျြ့တောငျ အနညျးဆုံး အခြိနျတဈနှဈလိုပါတယျ။ ဘယျသူမှ education အတှကျ စိတျမရှညျကွပါဘူး။
❌ ငှစေုလိုကျ၊ Account ထဲှေဖွညျ့လိုကျ၊ စိတျထငျရာ trade လိုကျ၊ ကုနျသှားလိုကျ သံသရာထဲမှာလညျကွတယျ။ မိမိ ရဲ့ အမှားကိုရှာဖှဖေို့ ပွငျဆငျဖို့ စိတျမရှညျတတျကွပါဘူး။
စိတျမရှညျခွငျးဟာ Forex လောကမှာ အကွီးဆုံးရနျသူပါ။ မိမိရဲ့ အတှငျးစိတျထဲမှာရှိနတေဲ့ အတှငျးရနျပါ …ကုနျခဲ့တဲ့ 2017 မှာ မိတျဆှေ ကိုယျဘာတှမှေားခဲ့သလဲ ပွနျပွီးရှာဖှေ ပွီးပါပွီလား ? အဲဒီ အမှားတှကေို ပွငျဆငျဖို့နညျးလမျးရော ခမြှတျပွီးပါပွီလား ?
Trader မြားအတှကျ စတေနာစကားကတော့ စိတျရှညျသညျးခံခွငျး Patience ဟာ Forex လောက ကို အောငျနိုငျဖို့ တဈခုတညျးသော နညျးလမျးဆိုတာပါပဲ။
Posted on January 5, 2018 Author Ko ThantCategories Forex Lesson
4 thoughts on “Forex Trading မှာ အရေးအကြီးဆုံးအရာ”
Previous Previous post: ဝယ်ဖို့ အချ က်ပြနေတဲ့ရွှေ။
Next Next post: Nonfarm Payroll